झमक भेषमा रोजिता
उहिलेको नेपाल पढ्न
गण्डकी घुम्न आउनुस्
प्रधानमन्त्री ओलीले मागे सचिवालय सदस्यका राजीनामा
उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान विवाद टुंगियो, गोल्छा अध्यक्ष पक्का
नेपाली भूमि मिचिएपछि सबै राजनीतिक दल एक जुट
असफल नेपाली विमान कम्पनी : जो उड्दाउड्दै ग्राउन्डेड भए
झमक भेट्नुअघि रोजिता बुद्धाचार्य (२६)लाई एकाबिहानै ‘थिएटर भिलेज’बाट फोन आयो । फोन थियो रंगकर्मी विमल सुवेदीकोे । भर्खर नुहाएकी रोजिताको कपाल पनि सुकेको थिएन । भिजेकै कपालमा उनी थिएटर भिलेज पुगिन् । भन्छिन्, ‘एकदम ‘झोलेपारा’ले पुगेको थिएँ ।’
थिएटर भिलेजमा पुगेपछि विमल सुवेदीले चिनाए ‘जीवन काँडा कि फूल’का निर्माण टिमलाई । तर, रोजिताका लागि सबै नौला थिए । लेखक मुकुन्द बराल र निर्देशक विनोद विष्टले घोरिएर हेरेको उनलाई सम्झना छ । चुपचाप बसिरहेकी रोजितालाई विष्टले सोधे, ‘जीवन काँडा कि फूल भन्ने किताब पढ्नुभएको छ ?’मनोविज्ञान जाँचिरहेको लाग्यो रोजितालाई । किताब कत्तिको पढ्ने कलाकार हो भनेर जान्न खोजेको पनि लाग्यो उनलाई । एकछिन अलमलिइन् । तर, कुनै दिन पुतलीसडकमा हिँडिरहेको वेला त्यो किताब किनेर पढेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘पढेकी छु ।’
एकछिनपछि फेरि निर्देशकले उनलाई भने, ‘आफ्नो कपाल काट्न सक्नुहुन्छ ?’ रोजिता अकमक्क परिन् । आफ्नो लामो र सिल्की कपाललाई उनीहरूले व्यङ्ग्य गरेजस्तो लाग्यो । रोजिताले भनिन्, ‘पहिला कपाल सोचेँ, अनि उपयुक्त भूमिका पाए कपाल काट्न सक्छु भनेँ ।’
त्यसपछि रोजिताले पुस्तक दोहो-याई/तेह-याई पढिन् । झमक घिमिरेलाई अझ नजिकबाट चिन्ने कोसिस गरिन् । भन्छिन्, ‘पढ्दै गएपछि उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरियो ।’ आफ्नो लामो कपालको माया रोजितालाई थियो । सँगै अभिनयप्रति गहिरो लगाव पनि । तर, रंगमञ्चको कलाकार भएको नाताले फिल्म पनि गर्नु नै थियो । मनमनै कपाल काट्ने अठोट गरिन् उनले ।
केही समयपछि विमल सुवेदीले फेरि थिएटर बोलाए, उनलाई । रोजिता थिएटर पुगिन् । उनको अगाडि एउटा ह्विलचियर थियो । उनलाई त्यहाँ बस्न भनियो । उनी बसिन् । गुरु विमलको निराश अनुहार देखेर रोजिता पनि निराश भइन् । सुवेदीले ह्विलचियरमा ढुंगाहरू राखिदिए । रोजिता फेरि बसिन् । रोजितालाई ढुंगाले घोच्यो । चलमलाइन् । अनि हतारमा उठिन् । भन्छिन्, ‘दाइले भन्नुभयो, शारीरिक अशक्त झमक घिमिरे दिदीलाई कति दुख्छ होला ?’
रोजिताले ‘इन द रेड एन्ड ब्राउन’, ‘वाटर’, ‘थ्री पेन्नी ओपरा’, ‘चारुमती’, ‘सुइना कर्णाली’ र रवीन्द्रनाथ टेगोरोको कथा ‘मालिनी’जस्ता नाटक खेलिसकेकी थिइन् । तर, झमकको संघर्षमाथिको भूमिकाले उनी तर्सिइन् । सगरमाथा आरोहणको दिन सम्झिन् । एथ्लेक्टिस खेलाडी पनि थिइन् रोजिता । उनले शरीरका अंगहरू खुम्च्याउन र बंग्याउन जानेकी थिइन् । तर, झमकको शारीरिक संरचना बिलकुल अलग थियो । त्यही संरचनामा आफूलाई बाँध्नु थियो । विमलले भने, ‘पहिला झमक दिदीलाई बुझ्नु ।’झमकको नक्कल मात्रै नगरेर ‘फिलिङ्स’ पनि बुझिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा विमल सुवेदी बारम्बार सम्झाउँथे । भन्छिन्, ‘मैले नक्कल गर्छु कि भन्नेमा दाइ डराउनुभएको थियो ।’
अर्को एक साँझ सुवेदीले खाना खाने निम्तो दिए रोजितालाई । उनी भोकाएकी थिइन् । र, खाना पनि तयार थियो । तर, उनलाई खाना खुट्टाले खाएर देखाउनु भनियो । उनी अवाक् भइन् । त्यो ‘टाक्स’ले उनको भोक मरेझैँ भयो । उनको लागि त्यो टाक्स पार गर्नुपथ्र्यो नै । झमक घिमिरेले देब्रे खुट्टाले खाना खाएजस्तै रोजिताले पनि कोसिस गरिन् । झमकको देब्रे खुट्टाका दुई औँला सम्झिइन् । झमकले चलाउने औँलालाई मनमा ल्याइन् । उनले युट्युबमा भिडियो हेरेकी थिइन्, र त्यसैअनुसार अभ्यास गरिन् । अभ्यासका दिन सम्झँदै भन्छिन्, ‘शारीरिक अशक्तताको पीडा त्यसवेला गरेँ ।’त्यति मिहिनेत पछि पनि झमकको भूमिका आफूले पाउनेमा रोजिता ढुक्क थिइनन् । फिल्म पनि बन्ने–नबन्ने टुंगो थिएन । भन्छिन्, ‘बल्ल १ वर्षपछि फिल्म बन्ने सम्भावना बढ्यो ।’
सन् २०१५ मा झमक घिमिरेलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम थियो, नेपाल पर्यटन बोर्डमा । त्यहाँ झमकका कविता सुनाइएको थियो । तर, रोजितालाई कविताभन्दा झमकलाई सुन्नु थियो । त्यहाँ कलाकार दीपक बज्राचार्यले उनलाई पु-याए । र, उनी अघिल्लो बेन्चमा बसेर झमक घिमिरेलाई हेर्न थालिन् । ती दिन सम्झिँदै भन्छिन्, ‘दिदीलाई नजिकबाट देखेर मेरा आङका रौँ उठेका थिए र कान रातो भएको थियो ।’
दिनभरि झमकलाई हेरेर बिताइन् । झमकको बसाइ नियालिन् । झमकको गोडामा ध्यान गरिन् । कार्यक्रम सकिएको भोलिपल्ट झमकलाई भेट्न रोजिता हार्दिक होटेल पुगिन् । दिदीलाई भेट्न जाँदा उनले आइक्रिम बोकेर गएकी थिइन् । त्यहाँ आइसक्रिम खाँदै गफिइन् । गफको क्रममा झमकको क्रियाकलापमा आफ्नो ध्यान फोकस भएको बताउँछिन् उनी । भन्छिन्, ‘दिदीलाई भेट्नु त थियो नै धेरै कुरा सिक्नु पनि थियो ।’
त्यो भेटमा उनले झमकको भूमिका गर्दै छु भनिनन् । बरु फ्यान भएकाले भेट्न आएको बताइन् । झमकसँगै उनले बहिनी सुशीलासँग भेट्न पाइन् । झमकसँग छुट्टिए पनि रोजिताले उनीबारे सुशीलासँग दैनिक कुराकानी गरिन् । हार्दिक होटेलमा भएको ५५ मिनेटको बसाइले रोजितालाई ठूलो आत्मविश्वास दिलायो ।
झमक घिमिरेको जीवनमाथि ‘जीवन काँडा कि फूल’ फिल्म बन्ने पक्का भयो । तर, वर्कसप भएको थिएन । वर्कसप नभई फिल्डमा जाने खबर उनले पाइन् । उनी आत्तिइन् । तर, निर्माण पक्षले उनको अप्ठ्यारो बुझ्यो । रोजितालाई सुटिङ हुनुअघि धनकुटा पठाइयो । उनी झमकको घरभन्दा माथिल्लो घरमा बस्न थालिन् । झमकको दैनिक क्रियाकलाप नियाल्न थालिन् । कोठामा फर्किएर झमकको क्रियाकपाल सिको गर्न थालिन् । भन्छिन्, ‘दिदीलाई बुझ्न र सिक्न मलाई निकै गाह्रो प-यो ।’
झमकको व्यक्तित्व देखेर रोजिता सुरुमा निकै डराएकी थिइन् । डरभित्र झमकको भूमिकालाई न्याय गर्न सक्छु भन्ने भरोसा पनि थियो । सुटिङ हुनुअघि उनले कपाल काटिन् । कपाल काटेको रात उनले धेरैपटक ऐना हेरिन् । र, आफूमा झमक खोजिन्, झमक भएर बोलिन्, झमक भएर बसिन्, झमक भएर खाइन् । झमक भएर सुतिन् ।
एकदिन कसैले झमकको सन्की स्वभाव छ भनेर भनिदिए । त्यसपछि उनी निकै डराइन् । कथंकदाचित झमकको मन दुखाएँ भने उहाँले के भन्नुहोला भन्ने लाग्यो । तर, संगत गर्दै गइन् । खुल्दै गइन् झमक । डर हटाउँदै लगिन् । फ्रेन्डसिप बढाउँदै गइन् । झमकले आफ्ना देब्रे खुट्टाको औँलाले बनाएका पेन्टिङ अहिले पनि रोजितासँग छ । त्यो पेन्टिङ निकै सम्हालेर राखेकी छिन् रोजिताले । फिल्ममा झमक घिमिरे बनेकी रोजिता भन्छिन्, ‘मलाई दिदीले छोरीजस्तै मान्नुभएको छ ।’
‘विमान विद्रोह’को राजनीतिक क्षेत्रफल
प्रसिद्ध रेडियोकर्मी यज्ञनिधि दाहालकाे निधन
मुन्धुम, दर्शन र हाक्पारे
सहर एक : पखेटारहित
नबिर्सिनु है मलाई
बार्डोमा लिंकनलाई भेट्न खोज्दा
के राम पत्नीपरायण थिएनन् ?
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुस्तकालय उद्घाटन
प्रश्न र समाधान : विद्युती�...
विद्युतीय शासन भन्नाले के बुझिन्छ ? स्
म्यानमारकी नेत्री सुकी का�...
म्यानमारकी विदेश मन्त्री आङ साङ सुकी
रक्षामन्त्रीको गुनासो : रा...
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखर
अर्थ /वाणिज्य (1,239)